Medical Writings for Over 18: Hyperprolactinaemia နို့ထွက်-ဟော်မုန်းများခြင်း
အမျိုးသမီးတွေမှာ နို့ရည်ထွက်သင့်ချိန်မဟုတ်ပဲ ထွက်တာ အဖြစ်နည်းတယ်ဆိုပေမဲ့ မေးခွန်းမေးသူ အခုထိ (၃) ယောက် ရှိပါတယ်။
မေးခွန်း (၁) Sat, Dec 29, 2012 at 5:27 PM
သမီးအသက်၂၅ နှစ်ရှိပါပြီ။ အိမ်ထောင်တော့မရှိပါ။ ချစ်သူတော့ရှိပါသည်။ ၉ လပိုင်းဝန်းကျင်ကစပြီး သမီးရင်ဘတ်မှ နို့ရည်ကြည်များ ထွက်တာသတိထားမိပါသည်။ တပတ်ကျော်လောက်ထိ ဆက်တိုက်ထွက်နေသောကြောင့် သားဖွားမီးယပ်နှင့်ပြရာ ဆရာမက ဦးနှောက်မှဟော်မုန်းတစ်မျိုးထွက်တာများလျှင်ဖြစ်တတ်ကြောင်း prolatin level စစ်ခိုင်းခဲ့ပါသည်။ 14.9.2012 မှ result သည် 127.8 ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြော ဆရာမထံသို့ ပြသရန် ပြောခဲ့ပါသည်။ 25.9.2012 တွင်ပြသခဲ့ရာ ဆရာမက MRI နှင့် အခြားလိုအပ်သော စစ်ဆေးချက်များ ပြုလုပ်ခိုင်းပြီး parlodel 25mgဆေးကို တနေ့တစ်လုံးသောက်ရန် သုံးရက်စာပေးလိုက်ပါသည်။
28.9.2012 တွင် MRI result (1. Prolatinoma about 4.0mm x 6.0mm at central region of pituitary gland. 2. Remaining study is normal) ရပြီး 4.10.2012 တွင် ထပ်မံပြသသောအခါ parlodel 25mg ကိုတစ်ရက်တစ်လုံး နှစ်ပတ်သောက်ပြီးလျှင် တစ်ရက်လျှင် နှစ်လုံးနှစ်ပတ်သောက်ရန် ညွှန်ကြားပါသည်။ ဆေးစစသောက်ချင်း ခေါင်းမူးပြီး အန်ချင်သလိုလို ဖြစ်သောကြောင့် 11.10.2012 တွင် ထပ်မံပြသရာ တစ်ရက်တစ်လုံးနှင့် တစ်လသောက်ပြီးလျှင် ယခင် စစ်ခဲ့သော နေရာတွင် prolatin level ပြန်စစ်ပြီး ပြန်လည်ပြသရန်ညွှန်ကြားပါသည်။ 11.11.2012 result prolatin level 6.94 ဖြစ်ပါသည်။ 13.11.2012 တွင် ဆရာမက prolatin level ကျသွားသောကြောင့် ခွဲစိတ်စရာမလိုဟုပြောပြီး တစ်ရက်ခြား တစ်လုံးကို တစ်လပြန်သောက်စေပါသည်။ 13.12.2012 တစ်လပြည့်ပြီး ပြန်သောအခါ ထိုနည်းအတိုင်း ပြန်သောက်ခိုင်းပြီး တစ်လပြည့်လျှင် prolatin level ပြန်စစ်ပြီးပြန်ပြရန်ပြောပါသည်။
3.9.2012 ရာသီပေါ်ပြီးနောက် 16.10.2012 နှင့် 16.11.2012 တွင်ရာသီပေါ်ပါသည်။ အားနည်းလျှင်နည်းသလို နောက်ဆုတ်သွားတတ်ပါသည်။ သို့သော်ဆုတ်လျှင်လည်း အများဆုံး နှစ်ပတ်လောက်ပဲဆုတ်တတ်ပါသည်။ သွေးအား ကောင်းစေရန် Viferron သောက်ပါသော်လည်း 29.12.12 ထိရာသီမပေါ်သေးပါ။ 24.12.12 တွင် ညာဘက် ရင်ဘတ်မှ အရည်ကြည် အနည်းငယ် နှစ်/သုံးစက်ထွက်လာပါသည်။ နောက်တော့ မထွက်တော့ပါ။ 12 လပိုင်း အလယ်ခန့်တွင် ရင်သားထဲမှ အောင့်ပြီး အနည်းငယ်လျော့တွဲလာသည်ဟု ခံစားရသည်။ ဒီရက်ပိုင်း 25.12.2012 မှစပြီး ရင်သားများ တင်းလာပြီးအထဲမှအောင့်နေုပြန်ပါသည်။
မေးခွန်း (၂) Apr 25, 2011 at 7:34 PM, I am 34 years old female married for2years and have no children. My menstruation is becoming less. If I am not wrong it started since 10 years ago. Before this period, I had mental problem like crying and depression. Two years before marriage, I went to see doctor and she checked the whole body and found my Prolactin level wasalittle bit higher than normal. That time I did not understand it and did not go for second appointment. Now my menstruation becomes less and less. It comes only two days. Five months ago I went for OG check. She found my uterus was normal and asked me to come back after one year. I am really disappointed of my problem as I want to becomeamother very much. I do not know how to do. May I know about Hyperprolactinaemia and the treatment? Currently I do not have any health problem and I can control my emotional problem by meditation. မေးခွန်း (၃) Tue, Aug 13, 2013 at 7:42 PM
ကျွန်တော့် ချစ်သူဟာ အသက် ၃ဝ နှစ်ပါ။ ရန်ကုန်ကပါ။ ကလေးတော့တစ်ခါမှမရှိဘူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ရင်သားကနေ ကလေးအမေတွေလို နို့ထွက်နေပါတယ်။ အဲဒိလို ဖြစ်နေတာ ၆ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ အဲဒါဘာကြောင့်ပါလဲ။ အန္တရယ်တွေ ဘာတွေ ရှိနိုင်ပါလားဆရာ။ အဖြေ
Hyperprolactinaemia (ဟိုက်ပါ ပရိုလက်တင် နီးမီးယား) ဆိုတာ သွေးထဲမှာ ဟော်မုန်းတမျိုး များနေတဲ့ ရောဂါပါ။ လူတိုင်းမှာ ဟော်မုန်း ဆိုတာတွေက အမျိုးမျိုး ရှိကြတယ်။ နည်းတာ-များတာ မတူကြပါ။ တယောက်ထဲမှာလဲ အနည်း-အများ ကွဲပြားတယ်။ Prolactin ဆိုတာ နို့ထွက်စေတဲ့ ဟော်မုန်းဖြစ်တယ်။ ဦးနှောက်ထဲက Pituitary gland ဆိုတာကနေ Prolactin ဟော်မုန်း ထုတ်ပေးနေတာပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ နို့ရည် မထွက်ခင်မှာ ရင်သား ဖွံ့ထွားစေဘို့ သူက လုပ်ပေးပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ ကလေး နို့တိုက်ချိန်မှာ များလာတာကို ရောဂါမခေါ်ပါ။
မိန်းမမှာသာရှိတယ် မထင်ပါနဲ့။ ယောက်ျားတွေမှာ 450 mIU/L အထိရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးတွေမှာ 580 mIU/L အထိ ရှိနိုင်တယ်။ မီးယပ်ရောဂါနဲ့ ဆက်ပြီး ဒီရောဂါဖြစ်ရတဲ့ အမျိုးသမီး ၉-၁၇% အထိ ရှိနိုင်တယ်။ ကျားရော မပါ ပေါင်းရင် ဝ့၎% ရှိတယ်။
• Puberty အရွယ်ရောက်ချိန် နောက်ကျတယ်။
• Headaches ခေါင်းကိုက်တတ်တယ်။
• Langerhan's cell histiocystosis ရောဂါ၊ Hypothyroidism လည်ပင်းကြီး-ဟော်မုန်း နည်းရောဂါ၊ Cushing's syndrome ရောဂါ၊ Polycystic ovary syndrome မျိုးဥအိမ် အိတ်တွေဖြစ်တဲ့ရောဂါ၊ ကျောက်ကပ် အလုပ်မလုပ်တော့တာ၊ ဆိုးဝါးတဲ့ အသဲရောဂါ၊
Cabergoline (၈၃%)၊ Bromocriptine (၅၉%) ထိရောက်တယ်။ တပါတ်မှာ ၂ ရက်သာ သောက်ဘို့ လိုတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးလဲ နည်းတယ်။ ခေါင်းမူးတတ်တယ်။ ပျို့အန်ချင်တယ်။ နေ့ခင်း အိပ်ပျော်တတ်တယ်။ ဆေးကို အစာစားနေတုံး သောက်သင့်တယ်။ ဆေးအဆ နည်းနည်းက စသင့်ရင် စရတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိလာရင် နဲ့ နို့တိုက်ချိန်မှာ ဆေးဖြတ်ထားတယ်။
• Cabergoline ဆေး ၆ ပါတ်ပေးပြီး MRI ပြန်လုပ်ရင် Microprolactinoma က သေးသွားတာ တွေ့ရမယ်။ Macroadenoma ဆိုရင် သေးမသွားဘဲ ခွဲစိတ်ကုသရမယ်။ Prolactin ကျမယ်၊ Oestrogen ပြန်တက်မယ်။
• Radiotherapy ဓါတ်ကင်တာလဲ လုပ်ပါတယ်။ ပြန်မဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်တာပါ။ ဒီလိုလုပ်ရင် Hypopituitarism ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
• မအေမှာ ဒီရောဂါရှိလို့ သူ့ကလေးမှာ လာဖြစ်တာလဲ မရှိသလောက် ရှားပါတယ်။
True virgin အပျိုစစ် Sat, Jun 30, 2012 at 9:53 AM ကျမတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်မှာ ပြဿနာတစ်ခု တက်နေပါတယ်ရှင့်။ ကျမက အခုအသက် ၂၃ နှစ်ရှိပါပြီရှ...
Q and A Over 18 Readings (106)
Pregnancy and Antihistamines ကိုယ်ဝန်နှင့် (ဘာမီတွ...
Q and A Over 18 Readings (105)
Q and A Over 18 Readings (104)
Q and A Over 18 Readings (103)
Q and A Over 18 Readings (102)
Q and A Over 18 Readings (101)
Contraceptive Natural Methods သဘာဝ တနည်းနဲ့ ကိုယ်ဝ...
Q and A Over 18 Readings (100)
Q and A Over 18 Readings (99)